IsiTsonga singulimi lwamaTsonga. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangama-4 000 futhi siqondwa ngabantu abangama-13 000 000. Ezisemth
ⓘ IsiTsonga singulimi lwamaTsonga. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangama-4 000 futhi siqondwa ngabantu abangama-13 000 000. Ezisemth ..